Manni Murtii Ameerikaa dallaa daangaa ijaaruuf qabataniif maallaqa oolu murteesse - BBC News Afaan Oromoo
Manni Murtii Ameerikaa dallaa daangaa ijaaruuf qabataniif maallaqa oolu murteesse
Goodayyaa suuraa Manni Murtii Ameerikaa ijaarsa dallaa daangaaf murteesse
Preezidantiin Ameerikaa Doonaald Traamp dallaa daangaa Meeksikoo waliin qaban ijaaruuf qabataniif kan ooluu Pentaagoon irraa doolaara biiliyoona 2.5 akka fayyadaman manni murtii olaanaa biyyattii murteesse.
Manni murtii olaanaa biyyattii murtee manni murtii federaala biyyattii Kaalifoorniyaatti argamuTraamp maallaqa kana akka hin fayyadamne dhorkee ture sagalee deeggarsaa 5 fi kan mormii afuriin fashalsuun akka itti fayyadaman murteesse.
Traamp imaammata baqattootaa gargar baasuu hambisan
Tiraamp dhimma godaantotaarratti wal hin galle jedhan
Traamp bara 2016 filannoo preezidantummaa ijifatan irratti na filadhaa malee jechuun uummataaf wantoota kakatan keessaa ijaarsi dallaa daangaa kun isa ijoo ture.
Dimookraatotni yaada kana hadheefatanii mormaniiru.
Akka murtee kanaatti maallaqichi Kaalifoorniyaa, Arizoonaa fi Neew Meeksikootti dallaa jedhan ijaaruuf oola jedhameera.
Manni murtii federaalaa Koongireesiin biyyattii maallaqichi ifatti ijaarsa dallaaf haa oolu jedhee hin hayyamne jechuun ture murtee Traampiin dallansiise dabarsee kan ture.
Murtee ammaa kana booda ergaa twiitara isaaniirratti gadhiisaniin Traamp gammaduu isaanii ''injifannoo guddaa'' jechuun ibsaniiru.
Akka yaada preezidant Traampitti, dallaan kun godaansa seeraan alaa kan biyyattii keessatti yakki akka dabalu fi diingadee biyyattirratti ba'aa ta'e hambisa.
Tiraamp daangaa Kooriyaa Kaabaa seenan
Dimookraatotni nageenyi daangaa cimuu kan deeggaran ta'uus, dallaa ijaaruun baasii guddaa kan baasisu akkasumas kan hin milkoofnedha jechuun mormu. Traamp naannoo daangaatti rakkoon akka hammaatu gochuun ijaarsi dallaa akka murtaa'u taasisaniiru jedhu.
Jimaata darbe Ameerikaafi Guwaatimaalaan godaantota biyyoota Hunduraasiifi Elsaalvaador irraa Guwaatimaalaa qaxxaamuruun US galan iittisuuratti waliigaltee mallatteessaniiru.
Akka waliigaltee kanaatti godaantootni kun kallattiin gara US'tti ce'uu isaaniin dura Guwaatimaalaa keessatti kooluugaltummaa gaafatuu qabu.
US-Kooriyaa Kaabaa: Traamp daangaa Kooriyaa Kaabaa seenan